Mimpi Zviroto, iko kushandiswa kwevhiki | IPhone nhau
China chitsva, chishandiso chitsva chinosununguka kwemazuva manomwe. Pane ino nguva, iyo app yevhiki ndiwo mutambo unonzi Mimpi Dreams Uye iwo muenzaniso wakakwana uyo unoratidza kuti haudi mifananidzo yakakura kana kurira kunoshamisa kuti isu tive nenguva yakanaka. Chinhu chakakosha ndechekuti chinotinakidza uye ndizvo chaizvo zvatinozadzisa nekushandisa kwesvondo rino muApp Store.
Ini ndinotaura pamusoro pemifananidzo nekuti, mushure mekuisa uye kuvhura mutambo kekutanga, ndakave nekunzwa kuti waive mutambo wevana uye, une zita rauinaro, ndakafungidzira kuti yaive imwe yeaya anopindirana / ekudzidzisa nyaya. Asi hapana chekuona. Isu tiri imbwa chena diki iyo, kana ndisina kukanganisa, iri kurara uye chatinofanira kuita kusvika pamubhedha wedu kuti tirare, asi kwete pamberi gadzirisa mamwe mamiriro.
Mimpi Zviroto zvichaita kuti isu tifunge kugadzirisa imwe neimwe mamiriro
Semumitambo yakawanda paApp Store, iwo ekutanga nhanho / mamiriro anozoshanda sedzidziso kuti tizive kutamba Mimpi Doto. Iwo maitirwo ari nyore: tinogona kufamba kuruboshwe, kurudyi, kusvetuka uye kushamwaridzana nezvinhu uye mavara. Zvimwe zvinhu zvinokwanisa kufambiswa, zvakaita semadhirowa kana miti, asi kune zvimwewo zvatinofanira kubata kuti zvifambe uye zvitibatsire kufambira mberi.
Pese pano uye ipapo pane mabharuni kuti, patinobata, ivo vachatipa zvinotipa ruzivo pamusoro pezvatinofanira kuita. Semuenzaniso, mune rimwe rawo anotiudza kuti mamwe maziso anofanirwa kuvharwa kuitira kuti atore nhanho inotevera. Panguva iyoyo, isu tinofanirwa kubata maziso ezvimwe zvirimwa, chimwe chinhu icho, dai chisiri chengwara, tingadai tisina kumbofungidzira.
Sezvandambotaura, pakutanga ndakafunga kuti waive mutambo wemwana uyo waisazonakidza munhu mukuru, asi mushure mekutamba nhanho mbiri, ini ndinogona kungoisiya pane yangu iPhone. Iwe unogona kuita zvakafanana, uchitora mukana we vakasununguka Kusvikira svondo rinouya.
Mimpi Dreams1,09 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Mimpi Zviroto, kurarama zviroto zvembwa mune app yevhiki